Izindaba - Isibikezelo sokwehlukaniswa kwemakethe emisha yokufaka ukudla okusha kusuka ngo-2021-2028: Imakethe ehlukanisayo eguquguqukayo izobalwa ngo-47.6% wemakethe ngo-2020
Isibikezelo sehlukaniso semakethe yokupakisha kokudla okusha kusuka ku-2021-2028: Imakethe ehlukanisayo eguqukayo izobala i-47.6% yemakethe ngo-2020
I-Dublin - (IBHIZINISI LOKUSEBENZA) - "Usayizi wemakethe emaphaketheni wokudla okusha, ngohlobo (oluqinile, oluguquguqukayo), okokusebenza (ipulasitiki, iphepha nekhadibhodi, i-bagasse, i-polylactic acid), ngokufaka isicelo (imikhiqizo yobisi)" "Yabelana futhi Ucubungule iTrend Report "), isibikezelo sesifunda kanye nengxenye yezimakethe, umbiko we-2021-2028" ungeziwe kwimikhiqizo ye-ResearchAndMarkets.com.
Ngo-2028, imakethe entsha yokupakisha ukudla kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-181.7 billion dollars yaseMelika. Imakethe kulindeleke ukuthi inwebe ngesilinganiso sokukhula saminyaka yonke esingu-5.0% kusuka ku-2021 kuya ku-2028. Ukwanda kwesidingo semikhiqizo yobisi emisha emazweni asathuthuka kulindeleke ukuthi kube yiyona ehamba phambili emakethe ngesikhathi esibikezelayo.
Ngenxa yokuphazamiseka kokuthengwa kwempahla, imboni ibhekane nomthelela omkhulu ovela kubhadane lwe-COVID-19. Ukumiswa kokukhiqizwa eChina, ongomunye wabakhiqizi abakhulu bezinto zokusetshenziswa okuluhlaza, kuthinte abakhiqizi bokupakisha emhlabeni jikelele. Ukushoda kwezinto zokusetshenziswa ezifana nepulasitiki, i-aluminium kanye nensimbi yabakhiqizi baseChina kuholele ekutheni kube negebe lokutholakala nokufunwa, kepha abakhiqizi kulindeleke ukuthi bakhuphule kancane umkhiqizo.
Njengoba ukuthengwa kwempahla kungathinteki futhi ukungenisa kuqhubeka phakathi nobhadane lwe-COVID-19, isidingo sokupakisha semifino nezithelo ezintsha asishintshi. Ngokuqondile, ukuthengiswa kwezithelo nemifino enokuqukethwe okuphezulu kukavithamini C kukhuphuke kakhulu, kwaqhubeka kwandisa igebe phakathi kokuthengwa nokufunwa emakethe.
Isidingo esandayo sezixazululo zokupakisha ezinobungani bemvelo siphoqe izinkampani ukuthi zenze imikhiqizo evuselelekayo noma ebolayo. Isibonelo, ngoNovemba 2020, i-Amcor plc yethule umugqa omusha womkhiqizo iPackpyrus, isisombululo sokupakisha iphepha senyama noshizi. Ngokufanayo, ngoSepthemba 2019, i-PPC Flexible Packaging Co, Ltd. yethule imikhiqizo eluhlaza ye-PPC, kufaka phakathi izikhwama ezingaphinde zisebenze futhi ezingaphinde zisebenze kabusha, ukuqinisa iphothifoliyo yomkhiqizo wayo eqhubekayo futhi enobungani.
Abadlali abakhulu bemakethe bayaqhubeka nokuthola abadlali bezimakethe abancane ukuze bandise amasheya abo ezimakethe zomhlaba. Isibonelo, ngoFebhuwari 2019, iSealed Air yamemezela ukutholwa kwebhizinisi lokupakisha eliguquguqukayo le-MGM ukukhulisa isabelo salo semakethe nokwandisa iphothifoliyo yomkhiqizo wokupakisha kokudla. Ngokufanayo, ngoJuni 2019, i-Amcor Plc ithole iBemis Company Inc., umkhiqizi opakishayo oguqukayo futhi oqinile ozinze e-United States, ukukhulisa ithonya layo lomhlaba jikelele.
I-PeopleAndMarkets.com ingumthombo ohamba phambili emhlabeni wemibiko yocwaningo lwemakethe yamazwe omhlaba kanye nedatha yemakethe. Sikunikeza ngemininingwane yakamuva ezimakethe zomhlaba jikelele nezezifunda, izimboni ezibalulekile, izinkampani eziphezulu, imikhiqizo emisha kanye nezitayela zakamuva.